वैशाखभित्रै शिक्षकको बिज्ञापन हुने, कसरी गर्ने तयारी ? – Saurahaonline.com
काठमाडौं : शिक्षक सेवा आयोगले अब नयाँ संरचनामा शिक्षकको विज्ञापन गर्ने भएको छ । गत वर्षको असोजमा संशोधन भएको शिक्षक सेवा आयोग दशौँ संशोधन नियमावलीले नयाँ संरचना अनुसार विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै आयोगले पनि त्यसै अनुसार विज्ञापन गर्ने भएको हो । नियमावलीमा व्यवस्था गरिए अनुसार आयोगले माध्यामिक र निम्न माध्यामिक तहको विज्ञापन प्रदेशस्तरमा र प्राथमिक तहको विज्ञापन जिल्लास्तरमा गर्नेछ ।
अब नियमावली संशोधन भएसँगै निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको हकमा आयोगले अब रिक्त शिक्षकको पदपूर्ति प्रदेशस्तरमा गर्नेछ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘आयोगले रिक्त शिक्षक पदपूर्ति गर्न आवश्यक विवरण खुलाई राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट विज्ञापन गराउनु पर्नेछ । यसरी विज्ञापन गर्दा प्राथमिक तहको हकमा जिल्लागत निम्नमाध्यामिक तहको हकमा प्रदेशस्तरमा विज्ञापन गर्नु पर्नेछ ।’
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न, शिक्षकका लागि आवश्यक पर्ने अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न र शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ ले दिएको सुझावअनुरुप शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको छैंठौं संशोधनले २०५६ सालमा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको गठन भएको थियोे । त्यसपछि वि सं २०५८ साल माघ २५ गते शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको सातौं संशोधनद्वारा शिक्षक सेवा आयोग गठन भएको हो । आयोगले हालसम्म ५७ हजार लाई स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ।
लामो समयदेखि शिक्षकको बिज्ञापन नहुंदा यसबारे चासो बढेको छ । शिक्षक सेवा आयोग तयारी गरिरहेकाहरु समेत आयोग खुल्ने टुङगो नलाग्दा अलमलमा परेका छन् । तर आगामी बैशाख मसान्त सम्ममा शिक्षकको बिज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेको आयोग श्रोतले बताएको छ। पदाधिकारीबिहीन अवस्थामा रहेको आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीको प्रक्रिया अघी बढ्न थालेको र लगत्तै बिज्ञापन हुने बताइएको छ ।
यस्तो छ आयोगको संगठनात्मक स्वरुप
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ ‘ङ’ बमोजिम आयोगको एक छुट्टै सचिवालय रहने व्यवस्था छ । सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, शिक्षा सेवा प्रा सहसचिव को दरवन्दी रहने व्यवस्था रहेको छ । शिक्षक सेवा आयोगको सचिवालयअन्तर्गत मुख्यतः एउटा केन्द्रीय कार्यालय ‘शिक्षक सेवा आयोग’ रहेको छ । प्रशासकीय प्रमुख शिक्षा सेवाका सहसचिव को नेतृत्वमा शिक्षा सेवाका ७ जना उपसचिव र १ जना लेखा समूहको गरी जम्मा ८ जना उपसचिव, ८ जना शाखा अधिकृत र अन्य १८ जना गरि कूल ३४ जना कर्मचारीहरुको दरवन्दी रहेको छ ।
शिक्षक सेवाको तयारी कसरी गर्ने ?
परीक्षा पाठ्यक्रमअनुसारको व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ निरन्तरको तयारी र प्रस्तुतिको प्रतिफलमा सफलता हात पर्ने विषय हो। त्यस्तै, धेरै पुस्तक पढ्न सक्ने अनि घोकेर कण्ठ पारेर सुनाउन सक्नेले मात्र पास गर्ने पनि होइन। यो तपाईंलाई दिइएको विषयवस्तुमा तपाईंको भरपुर ज्ञान र त्यसको प्रश्नानुसारको प्रस्तुतिमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले, वस्तुगत र विषयगत परीक्षाको तयारीमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ।